यो आदर्श वजन विषय को चर्चा चलिरहेको बेला अक्सर प्रश्न सुनेको कुनै गोप्य छ "कसरी स्वास्थ्य गर्न हानि बिना वजन गर्न?"। तर वजन - एक capricious कुरा। एक बेफाइदा - केही यसको अतिरिक्त, अन्य torments। र अब म हृदय देखि कराउँदै सुन्न: "कसरी स्वास्थ्य गर्न हानि बिना पुन: प्राप्त गर्न?"। गरेको यो जलिरहेको प्रश्नको जवाफ प्रयास गरौं।
शरीर रिकभरी गर्न tends
किन केही मानिसहरू धेरै (मीठो र starchy खाद्य पदार्थ सहित) खान किन्न सक्छन् र बोसो प्राप्त छैन? अरूलाई बन्दागोभी आहार मा बस्न, तर एउटै प्राथमिक custodial तरकारी रूपमा "मांसल" बाँकी छन्। यो जडान मा यो संसारमा विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरू द्वारा आयोजित एक प्रयोग को परिणाम रोचक छ। प्रजा (पोटिलो र दुबला) गर्दा ठूलो परिमाणमा एक उच्च-क्यालोरी खाना खुवाउनुभयो।
यो वजन सबै प्राप्त गर्ने फेला परेन, तर आधारलाइन फरक डिग्री, र परीक्षण पछि पनि सँगै, प्रत्येक फ्याँकिएको। शोधकर्ताओं धारणा पुष्टि: एक स्वस्थ शरीर आफ्नो वजन र "तनाव अवस्था" (बाध्य ज्यादा वा कुपोषण) को अन्त मा सामान्य व्यक्तिगत पुनर्स्थापना गर्न खोज्छ "रूपबाट"।
डाक्टर (कोच) को बारेमा व्यक्तिगत कुराकानीमा ठीक कसरी स्वास्थ्य गर्न हानि बिना, सुझावहरु आवश्यक हर्मोन स्तर मा छुनुहोस्। त्यहाँ एक पेप्टाइड छ हर्मोन leptin, जो असर ऊर्जा चयापचय शरीर मा। geneticists को संख्या यो अपर्याप्त परिमाणमा संश्लेषित छ मोटोपन झुकाउ कि विश्वास गरे। यो अक्सर निहित सुविधा छ। तर हर्मोन उत्पादन को स्तर परिवर्तन कुनै पनि समयमा एक व्यक्तिको जीवन दौडान गर्न सक्नुहुन्छ। यो अक्सर गर्भावस्था को समयमा, प्रसब पछि, निरोधकों र यति मा प्रयोग गर्दा हुन्छ। र अझै, जस्तै अतिरिक्त क्यालोरी खपत गरिन्छ? यो फरक बाहिर जान्छ।
त्यहाँ कद को मान्छे तीन प्रकारका विभाजित छन् कि एक सिद्धान्त छ:
सुरुमा अतिरिक्त बोसो कक्षहरू स्टक Replenish गर्न। मा हड्डी र मांसपेशीमा बलियो मा दोस्रो गो, तिनीहरूले ऊर्जा-गहन र सजिलै देखिने वजन दिन छैन छन्। अरूलाई मा क्यालोरी खर्च गर्ने स्नायु प्रणाली को बलियो बनाउँछ। त्यहाँ अन्य सिद्धान्त हो।
एक स्वस्थ मानिस मा पुन: प्राप्त गर्न कसरी (र मात्र होइन), तपाईं एक analogy आकर्षित गर्न सक्छन् सोच। यदि तपाईं यसलाई कम खर्च र थप कमाउन क्यालोरी पैसा सदृश, तिनीहरूले जम्मा। तथापि, "रुपैया" मा यसको विपरीत आफ्नो वालेटमा शरीर को सही मा (र कहिलेकाहीं अनावश्यक) भागहरु छ, र। हामी खर्च भन्दा प्राप्त शक्ति एकाइहरु अधिक थियो भनेर यो शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक छ (अर्को शब्दमा, त्यहाँ धेरै छन्)। तर समय तालिका समायोजन बनाउन। सरल शारीरिक अभ्यास गर्न थाल्छन्। त्यहाँ विशेष सुविधा छन्।
त्यसैले, तपाईं राम्रो प्राप्त गर्ने निर्णय भने पर्याप्त शक्ति सन्तुलन र शक्ति भार पालन गर्छन्। नोट: शक्ति! तपाईं दौडना, उदाहरणका लागि, शक्ति समायोजन र भने - वजन बढ्न छैन। यो एरोबिक व्यायाम, बढ्न मांसपेशिहरु उत्तेजित छैन। तपाईं केवल दुई अतिरिक्त किलोग्राम दैनिक आवश्यक छ भने, त्यसपछि सामान्य आहार बाहेक, दूध, प्रति दिन एक लीटर भन्दा कम पिउन।
बालिका र महिला लागि
ठीक सुन्दर आधा गर्न पनि, आहार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो chetyrehrazovoe भन्दा कम हुनु हुँदैन। प्लस नाश्ता (यो उद्देश्य, उपयुक्त अनाज, नट, सुकेको फल लागि)। वजन योगदान कि खाद्य पदार्थ को आधारभूत आहार थप्नुहोस्। आफ्नो दैनिक मेनु उपलब्ध भने, तपाईं पहिले नै आंशिक एक स्वस्थ तरिकामा ठीक गर्न कसरी मुद्दा समाधान छ।
अक्सर खान - satiety गर्न खान छैन। मेनु यो कार्बोहाइड्रेट, माछा, समुद्री भोजन, मासु, अन्डा को छैन predominance, बोसो घरेलु पनिर महत्त्वपूर्ण छ, विचारशील हुनुपर्छ। पहिलो भोजन मात्रा थप खपत भएको छ।
केही nutritionists पहिलो र दोस्रो स्वाप प्रभाव हासिल गर्न सल्लाह - पहिलो, दोस्रो खान त सूप चिल्लो लागेको शोरबा। सिफारिस दिलकश नाश्ता, तिनीहरूले भोक जगाउन। अंश धेरै राख्छ। एक हार्दिक नाश्ता उदाहरण, दूध संग porridge लागि, महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, खाना धेरै अवशोषित गर्न गाह्रो छ, त्यसपछि बानी, बोसो मान्छे को लागि खराब, fattening लागि - बस। महत्त्वपूर्ण उच्च क्यालोरी पेय: दूध, बोसो दही।
शान्त, तर शान्त!
वजन गर्न फाल्ने शक्ति, कुनै पनि मामला मा व्यायाम हरेस छैन। तर तपाईं अन्तमा एक स्वस्थ तरिकामा ठीक कसरी बाहिर समझ। तर यो के हो? संग प्रशस्त खाना छली किलोग्राम को कमर मा टिप्न, कूल्हों! dumbbells, barbells, सिमुलेटर को प्रयोग संग व्यायाम: आंकडा SPOILED होइन, पुरुषहरु को रूप मा, महिलाहरु वजन प्रशिक्षण आवश्यक छ। तपाईं नियमित फिटनेस मा संलग्न भने, मधुर स्वर वृद्धि वजन वितरण गरिएको छ।
जिम प्रशिक्षक तपाईं बताउन कसरी प्रशिक्षण तीव्रता गणना गर्न हुनेछ। यस्तो उपस्थिति परिवर्तन गर्न एक दृष्टिकोण समय र प्रयास आवश्यक छ। मान्छे एक प्रारम्भिक परिणाम लागि खोजिरहेका लागि सल्लाह छ। तत्काल पेय को आहार मा थप्न, तिनीहरूले खेल पोषण पसलहरुमा बेचिन्छ। मिश्रण को संरचना तिनीहरूले फाइबर, प्रोटिन र भिटामिन समावेश, सन्तुलित छ। सक्रिय पचा लिया जान्छ पिउने, यो तपाईं चाँडै मांसपेशी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। तर यस मामला मा, सन्तुलित दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले उपलब्ध छन् भने यो धूम्रपान गर्ने बानी, रक्सी खपत को छुटकारा गर्न सिफारिस गरिएको छ। तनाव (स्वास्थ्य गर्न हानि बिना रिकभर गर्न रूपमा विचार सहित) जोगिन, एक महिलाले भावनात्मक पृष्ठभूमि सामान्य छ राख्न महत्त्वपूर्ण छ।
pancreatitis लागि कसरी रिकभर गर्ने?
त्यहाँ जहाँ सल्लाह राम्रो छ, चरम सावधानीपूर्वक नजिक हुनुपर्छ अवस्थामा छन्। यो पुरानो pancreatitis ग्रस्त गर्नेहरूलाई लागू हुन्छ। तपाईं गैस्ट्रिक रस को उत्पादन वृद्धि गर्ने खाद्य पदार्थ खान सक्दैन। यी बलियो शोरबा (माछा, हड्डी, च्याउ) समावेश गर्नुहोस्। तारेको खाद्य पदार्थ, धूम्रपान मासु जोगिन आवश्यक छ। फैटी मासु (पोर्क, हांस, sturgeon आदि), यो मामला मा inapplicable हुनुहुन्छ क्यान्ड तरकारी आवश्यक तेल (लसुन, प्याज) को रूपमा। एक स्वस्थ तरिकामा ठीक कसरी निर्णय, pancreatitis खातामा आहार गर्न सबै विवरण लिन रोग को वृद्घि समाप्त भएन विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
ताजा र धनी र पेस्ट्री, कफी, चकलेट को आहार लागि उपयुक्त छैन। कुनै सस, मसला, तोरी, सुविधा ठूलो भोक। त्यसपछि के हो? अन्डा को सफेद, दलिया, भटमास। यी उत्पादनहरू proteolytic इन्जाइमहरु (biologically सक्रिय पदार्थ पाचन मदत) को inhibitors समावेश गर्दछ।
वा सुकेको रोटी हिजो। सूप, क्रीम, मासु। ताजा पनीर। नाजुक फाइबर (गाजर, zucchini, आलु) संग तरकारी। फल (जेली, हलुआ, mousse)। दैनिक ताप बिस्तारै बढ्न आवश्यक छ। यस उपस्थित चिकित्सक तपाईंलाई बताउन कसरी एक स्वस्थ तरिका मा पुन: प्राप्त गर्न अधिकार उत्पादनहरु को पूर्ण सूची भन्नेछु।
बाहिर सफलतापूर्वक भरिएको भएकाहरूलाई देखि सल्लाह
एक स्वस्थ तरिकामा ठीक कसरी लागि नुस्खा लागि देख गर्नेहरूका लागि अनुभवी समीक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण समर्थन छन्। यो बुझ्ने छ: धेरै मान्छे लाग्छ कि त्यहाँ वजन वृद्धि गर्न सक्षम छन् जो मान्छे, छन् भने यो के र मैले गरे। भार को क्रूसिबल मार्फत पारित केही पनि आफ्नै सल्लाह विकास गरे।
यहाँ ती छ। मा 7-8 हूँ नाश्ता सुरु, तर तपाईं आफ्नो रहस्यवादी ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तर! यो एक ट्रिगर अपच किनभने, सारा दिन को लागि एक स्वस्थ भोक कसम, एकै समयमा नास्ता खान। चेतावनी! बिहान भोजन - यो किनमेल रोटी संग कफी छैन! को दलिया जोश, यो सुकेको थप्नुहोस्। वा दूध संग अनाज porridge पकाउन। तपाईं साग एउटा आमलेट बनाउन सक्छ। दिन को समयमा, आफ्नो समय तालिका, सल्लाह कोच, डाक्टर अनुसार खान्छन्।
आफैलाई राम्ररी व्यवहार
पक्कै पनि तपाईं एक स्वस्थ केटी, एक महिला वा स्वस्थ जीवन शैली विषयको थियो मानिसलाई राम्रो प्राप्त गर्न कसरी बारेमा कुराकानी मा हामीले देख्यौं छन्। कुनै - धूम्रपान, पिउने। हो - उचित आहार, खेलकुद। यो सबै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मानिसहरू भोक पटाखे, आलु चिप्स, पपकर्न, मकै लाठी पूरा गर्न, समय टेलिभिजन वा कम्प्युटरमा मनिटर हेर्दै खर्च गर्न चाहनुहुन्छ। यो खराब बानी हो।
विषय को अन्त मा, कसरी स्वास्थ्य गर्न हानि बिना वजन गर्न, इच्छा: उपयोगी व्यवहार कौशल को अधिग्रहण तिर आफ्नो दृष्टिकोण पुनर्विचार। पनि सबैभन्दा सरल, ताजा तयार गर्न छिटो खाना प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। (तरकारी र दुग्ध बोसो को एक मिश्रण मा आधारित खाद्य उत्पादनहरु) सर्छ प्रयोग नगर्नुहोस्। प्याकेज मा लेखिएको छनौट गर्नुहोस्: "दूध", "पनीर", आदि ( "दूध उत्पादन", "पनीर उत्पादन" को सट्टा) ... चलान मा खान छैन। र सबै ठीक हुनेछ।
कि चयापचय सुधार उत्पादन र हामीलाई स्लिम बनाउन
आहार: अण्डा र सुन्तला
को पित्त थैली हटाउन पछि शक्ति: के गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैन?
Bandaging: ओभरले प्रविधी। पट्टी को नरम प्याच
ट्याब्लेटको "Furosemide": प्रतिक्रिया सधैं सत्य हो
होटल4* Sharm भीर Resort (मिश्र / Sharm एल शेख): फोटो र समीक्षा
व्यञ्जनहरु र खाना पकाउने सुझावहरूको - पोलेको मशरूम को सलाद
रातो बन्दागोभी। व्यञ्जनहरु
"Neozidin" हो। निर्देशन
शक्ति surges को कारण र तिनीहरूलाई कसरी बाट जोगाउन
वर्तमान पुरातन समयका देखि अजरबैजान को इतिहास
मोटोपना को उपचार मा Garcinia गुण